1 သိန္း မွ2သိန္း ထိ ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ
♦ရန်ကင်းမြို့နယ် ဝါဝါဝင်းအိမ်ရာ စျေးတန် အခန်းလေးငှားမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19601868 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရန်ကင်းမြိုနယ် 750sqft တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19561452 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
♦ရန်ကင်းမြို့နယ် ဝါဝါဝင်းအိမ်ရာ ပြင်ဆင်ပြီး ငှားမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19554725 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရန်ကင်း၊ ဝါဝါဝင်းအိမ်ယာ ၊ ၆ လွှာ ( အပေါ်ဆုံးထပ် ) ၊ အကျယ် ၆၀၀ စတုရန်းပေ ၊ အိပ်ခန်း၂ ခန်း ။ တစ်လ ၂ သိန်း ၂ သောင်း...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19546079 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19534223 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09- 977122755. 09- 250146216
၁၂လုံးတန်းတိုက် ဒုတိယထပ် ငှားမည်.
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19638252 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်